Fandrefiala Club 57 taona nitaizana tanora
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Razafimahatratra Herilantosoa Nahafahako nahita ny tany andafy ny fanatanjahantena
Mbola hiverina eo amin’ny taranja tsipy kanetibe indray isika anio eto amin’ity pejin’ny Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy ity satria anisan’ny taranja namoaka tompondaka eran-tany maro ity taranja ity ho antsika Malagasy.
Hotanterahina anio zoma 15 desambra manerana an’i Madagasikara ny fifidianana ho filoha vaovao hitantana ireo ligim-paritry ny baolina kitra Malagasy.
Analamanga Rugby Hafana ny manasa-dalan’ny Tam Anosibe sy Tfma Ankasina
Taorian’ny nandreseny ara-teknika ny Tfa Anatihazo tamin’ny lalao “barrage” notontosaina tetsy amin’ny kianja Malacam Antanimena ny alahady 10 desambra 2017 teo dia ny ekipan’ny Tam Anosibe izany no hifanandrina amin’ny Tfma Ankasina eo amin’ny lalao manasa-dalana amin’ny alahady 17 desambra 2017
Hetsika Sambaraha andiany faha-6 Hiavaka amin’ny Hazakaza-gana sy Surf
Hiditra amin’ny andiany faha-6 amin’ity taona ity ny 20 ka hatramin’ny 23 desambra izao ny hetsika goavana fanao isan-taona ao Taolagnaro ao na ny Sambaraha.
Champion’s League 2018 Fifandonanan’ny samy ngeza
Vita tamin’ny alatsinainy 11 desambra teo ny antsapaky ny ampahavalon-dalan’ny lalao Champion’s League any Eoropa ;mangotraka tanteraka ny fifandonana, tahaka ny hoe lalao famaranana maro be.
Lalao Echec sokajy tanora Tompondakan’i Afrika i Harifidy
Nifarana ny sabotsy 9 desambra 2017 tany Giza any Egypte ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika sokajy tanora.
Tsipy kanetibe Atsinanana « Tournoi de Litchis » Lasan’i Hery sy Rony Toamasina ny fandresena
Norombahin’ny olon-droa niaraka Hery sy Rony avy any Toamasina ny amboara sy ny lelavola 3.000.000 ariary nofinidin’izy ireo halaina tamin’ny fifaninana tsipy kanetibe “
Klioba voalohany nitondra anarana Malagasy, nijoro tamin�ny taona 1960 ny Fandrefiala Club.
Manome lanja manokana ny fanatanjahantena sy ny fanabeazana ny klioba satria tanora ny ankamaroan’ny mpilalao mpikambana ao aminy ary misy 300 ny manana kara-pilalaovana (licenciés). Ny taranja baskety no tena ahafantarana ny Fandrefiala. Ahitana mpilalao lahy sy vavy ary amin’ireo sokajin-taona rehetra ao aminy. Tsara ny ezaka vita sy dingana natrehan’ny klioba tamin’ny taom-pilalaovana 2016, ka naha tompondakan’i Madagasikara ny U14 sy N1A teo amin’ny sokajy vehivavy, voahosotra ho mpilalao mendrika ny mpilalaony. Fa mifanojo indrindra amin’ny fitsanganan’ny birao vaovao tarihin’i Andriamananjezika Fehizoro Ony ny fiatrehana ny taom-pilalaovana 2017. Nametraka vina sy fanamby ny birao fa hanandratra avo ny lanjan’ny fanatanjahantena, indrindra ny baskety eto Madagasikara, eny fa na amin’ny sehatra iraisam-pirenena aza. Niantso ny tanora vonona hanatevin-daharana ny Fandrefiala ny mpitantana ny klioba tamin’ny tafa nifanaovany tamin’ny mpanao gazety tetsy amin’ny Coeur d’Amande Bel’Air, miantso ny malala-tanana sy mpiara-miombon’antoka ihany koa hifanome tanana amin’ny fabeazana ny tanora sy fampiroboroboana ny fanatanjahantena Malagasy.